अष्ट्रेलियामा यस्तो भयावह स्थिति, धुलो युक्त आँधी नथामिदै यस्तो असिना बर्सियो… बिजुलीकाे लाइन छैन…. – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > अष्ट्रेलियामा यस्तो भयावह स्थिति, धुलो युक्त आँधी नथामिदै यस्तो असिना बर्सियो… बिजुलीकाे लाइन छैन….
admin January 21, 2020 अन्तराष्ट्रिय, प्रवास, समाचार	0
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा धुलोको आँधी आएको २४ घण्टा नबित्दै फेरी बल जत्रा असिना झरेको छ । आकासवाट झरेका ति असिनाले सवारी साधनमा क्षति पुर्याएको छ भने चरालाई पनि झारेको छ । अष्ट्रेलियाको दक्षिणपूर्वी भूभागमा ‘गल्फ बल’ जत्रो असिना बर्सिएको हो । उक्त असिनले कारको झ्यालमा क्षती पुर्‍याउनुका साथै थुप्रै चराचुरुङ्गीलाई घाइते बनाएको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएका छन् । धुलोको मुस्लोयुक्त भयानक आँधी आएको थियो ।
यस्तो आँधी आएकाे २४ घण्टा नबित्दै उक्त स्थानमा भयङैकर असिना परेको हो । सोमबार अपरान्ह देशको राजधानी क्यानबेरामा बलजत्रो असिना परेको थियो । असिना परेसँगै कोही मानिस ओत लाग्न दौडिए भने असिनाको सम्भावित क्षतीबाट बच्नका लागि चालकले आफ्नो साधनलाई अन्डरग्राउन्ड पार्किङतिर कुदाएको देख्न सकिन्थ्यो ।
१५ मिनेटपछि २ इन्च चौडाइ भएको असिना पर्न रोकिएको केही बेरमा त्यहाँ गाडीको झ्यालको सीसामा क्षति पुगेको र दर्जनौं चराचुरुङ्गीलाई चो ट पुगेको देखिएको थियो । क्यानबेरामा रहेको अष्ट्रेलियन संस्थाका अनुसन्धानकर्ता तोम स्वानले त्यस बारेमा जानकारी दिएका हुन् । अष्ट्रेलियाको मौसम विभागका अनुसार उक्त असिना अब सिड्नी, ओलङ्गङ्ग र न्यूक्यासल सरेको छ । मौसम विभागले उक्त क्षेत्रमा वि ना स कारी आँधी, ठूला असिना र भारी वर्षाको सम्भावना भएको भन्दै चेतावनी जारी गरेको छ ।
उक्त असिना आइतबार बेलुकी धुलोको आँधी आएको २४ घण्टा नबित्दै परेको हो । उक्त आँधीले शहरलाई घप्लक्कै छोपेको थियो भने सूर्यलाई पनि ढाकेको थियो जसका कारण केही शहर दिउँसै अँध्यारो भए ।
मंगलबारदेखि अस्ट्रेलियाको पूर्वी भागमा आएको भीषण आँधीबेहरीका कारण करिब ३० हजार घरमा विद्युत लाइन अवरुद्ध भएको छ। मंगलबार बेलुका राजधानी क्यानबेरातर्फ फैलिएको आँधी पूर्वतिर अघि बढ्दै बेलुका साउथ न्यु साउथ वेल्स, क्वीन्सल्याण्ड र भिक्टोरियासम्म पुगेको थियो। राज्य आपतकालीन सेवा (एसइएस) का अनुसार सहयोगका लागि सिड्नीको दक्षिणी उपनगरबाट मध्यरातमा आठ सयभन्दा बढी टेलिफोन कल आएका थिए।
मुख्यतया यी फोनहरू भाँचिएका रूखका डरले आएको एसइएसका निर्देशक पल बेलीले स्काई न्यूजलाई बताएका छन्। रुखले सडकमा गुडिरहेका कैयौँ कारमा सवार मानिसहरूलाई थिचेको थियो। केही भागमा प्रतिघण्टा १०० किलोमिटरका हिसाबले आँधीबेहरी आएको बताइएको छ। सिडनीको पश्चिममा रहेको ब्रिन्जेली सपिङ सेन्टरको छानाका केही भागहरू हावाले उडाएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छन्।
भर्खरै ताप्लेजुङबाट आयो अर्को दुखद घटनाको खबर